Kora ABO magaala Amboo: Addi Bilisummaa Oromoo ABO’n Oromiyaatti sagantaa marii uummata waliin gaggeeffataa jira, danqaanis ABO mudate - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKora ABO magaala Amboo: Addi Bilisummaa Oromoo ABO’n Oromiyaatti sagantaa marii uummata waliin gaggeeffataa jira, danqaanis ABO mudate
Kora ABO’n magaala Ambootti uummata waliin mari’achuuf waameef jiraattonni magaala Amboo fi naannawashee Istaadiyeemii Ambootti walgahaniiru.Kora kanarratti hooggantoota olaanoo dhaabichaan alatti hoogganoonni dhaaba KFO argamaniiru.Maatiin qabsaa’ota wareegamaniis kan argaman ta’uu qondaaltota dhaabichaarraa iyyaafanneerra.Suurotni haala istaadiyoomii Amboo jiru ibsan muraasni kunooti.Gabaasa guutuu hordofnee isin biraan geenya.
ONN: Mudde 15,2019-Oromiyaa
Addi Bilisummaa Oromoo ABO’n Oromiyaatti sagantaa marii uummata waliin gaggeeffataa jira, danqaanis ABO mudate
Addi Bilisummaa Oromoo erga waraqaa beekamtii Boordii Filannoo argatee sagantaa uummata mariisisuu baafatee Oromiyaa keessa sochii isaa taasisaa jira. Kaayyoon sochii ABO inni guddaan sagantaa dhaaba isaa uummatatti beeksisuu fi caasaa isaa waliin mari’atee waan dhaaba guddaa uummata tokkoo irraa eegamu guuttachuuf caasaan gad ofdhaabuudha.
Sochii isaa kanaan ABO’n torbanoota darban Jilli Miseensa Shanee Gumii gumii sabaa akkasuma Dubbi Himaa ABO jaal Toleeraa Adabaa fi Jaal Jabeessaa Gabbisaa miseensa Shanee Gumii gumii sabaa ABO gaafatamaa dantaa siyyaasaan durfamu gara Jimmaatti imaluutiin uummata Jimmaaf naannoo isheef akeeka ABO’n Oromoof akkasuma sabaaf sablammoota biroof qabatee jiru uummatatti himaa turaniiru.
Akkuma kana jilli itti aanaa Hayyu Duree ABO jaal Araarsoo Biqilaan durfamu gara Baha Oromiyaatti imaluudhaan uummata Oromoo waliin waltajjii marii bal’aa taasifatee waajjira isaas banataa turuu gabaasaa turre.
Guyyaa har’aa jechuun Mudde 15,2019 ammoo ABO’n gara Lixa Oromiyaatti imaluu saganteeffachuudhaan jilli Hayyu Duree ABO jaal Daawud Ibsaan Durfamu gara Ambootti kaleessa yoo imalu, Jilli biraan ammoo kan Jaal Mikaa’el Booran miseensa Shanee Gumii gumii sabaa ABO gaafatama Sabquunnamtii dhaabichaan durfamu gara Wallaggaatti sochii taasisanii turan.
Sochii kana keessatti jilli gara Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtetti imale, osoo karaa jiruu waajjirri ABO Wallagga Bahaa kan magaalaa Naqamtee keessatti argamu humna waraanaa Komand post ugguramee barjaan isaaf ka dhibiin caccabuu gabaafamee ture. Haala kana keessatti hanga ammaa odeessa arganneen Jaal Mikaa’el erga Naqamte gahanii caasaalee mootummaa magaalichaa jechuun Bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi Kantiibaa magaalaa sana waliin dhimmi kun akka daddaffiin furamuuf guyyaa kaleessaa jechuun Mudde 14,2019 gaafatanii turan. Haa ta’u malee waltajjii marii ABO’n akka hingaggeeffanne waraanni bakkicha buufatee jiru dhorkee jiraachuu gabaafame. Haala kana keessatti akka gabaasa Magaalaa Naqamtee irraa argannetti Bulchiinsi magaalaa Naqamtee Kantiibaa magaalichaa waliin ta’uun addi Bilisummaa Oromoo ABO’n karaa nagaan akka marii isaa gaggeeffatu ayyameeraaf jedha. Ta’ullee ajajoonni komaand Post uummataan isin ajjeefna, isin hiina dhaadannoo jedhuun akka waltajjiin kamuu hingaggeeffamnee fi waajjirri ABO hojii kamuu dalaguu akka hinqabne akeekkachiisu gabaasan. Kun sochii karaa nagaa adeemsifamuuf gufuufi danqaa uumamaa jiru ta’uu gabaafamaa jira.
Jilli gara magaalaa Ambootti imale kan Hayyu Duree ABO jaal Dawuud Ibsaan hogganamu marii bifa bareedaadhaan gaggeeffataa jira. Jila kana waliin hogganni olaanaa dhaabichaa jaal Abdii Raggaasaa Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO kan jiran yoo ta’u, akkasuma hirmaataa sagantichaa ta’uudhaan hogganoonni KFO irratti argamanii jiru. Kana malees maatiin qabsaa’ota qabsoo irratti wareegamanii kan irratti argaman ta’uu gabaasaniiru.
Odeessuma wal fakkaatuun Magalaa Sulultaatti addi Bilisummaa Oromoo ABO’n guyyaa har’aa waltajjii marii gaggeeffataa akka jiru gabaasaniiru.